Shina milaza izany dia tsy Ahy, fa Tendrontany Atsimo Nahay 'am-pilaminana fampandrosoana ny harena' - China JP Metal & Equipment
Shina milaza izany dia tsy Ahy, fa Tendrontany Atsimo Nahay 'am-pilaminana fampandrosoana ny loharanon-karena'
Shina nitady ny hanala olana momba ny fanirian-daza amin'ny manan-karena mineraly-Antarctica ny Alatsinainy, tamin'ny manam-pahefana nanao hoe: Beijing tsy misy drafitra hanombohana fitrandrahana harena ankibon'ny tany ao amin'ny kaontinanta lehibe.
Shina 's fanitarana asa atao ao amin'ny faritra tendrony no toerana manan-danja toy ny teboka Beijing Tompon'ny maro ny fivoriana fanao isan-taona ny Tendrontany Atsimo Fifanarahana voalohany.
Nisy 42 400 solontena avy amin'ny firenena sy iraisam-pirenena 10 no nanatrika vatana ny forum, izay daka lavitra ary mifarana Alatsinainy 1 Jona.
'Tsy mbola banga eo amin'ny tanjon'ny fampandrosoana ny Tendrontany Atsimo am-pilaminana ny loharanon-karena sy ny fahatakarantsika ny Antarctica,' Lin Shanqing, lefitra lohan'ny-panjakana Oceanic Administration, nilaza tamin'ny mpanao gazety nanara-morona ny forum.
Lin tsy namaly ny fanontaniana ny zavatra tiany hambara, araka ny fampandrosoana harena am-pilaminana fa nanamafy fa Shina Tendrontany Atsimo fanafihana 'mifantoka amin'ny boosting ny fahatakarantsika ny Tendrontany Atsimo sy tsara kokoa hitehirizana ny Tendrontany Atsimo tontolo iainana.'
'Araka ny fahalalako, i Shina no nanao drafitra ho an'ny harena ankibon'ny tany tsy misy asa any Antarctica,' Lin nanampy.
Manam-pahaizana no nanangana ny ahiahiny fa Shina manafim ny tanjona mandritra ny fotoana maharitra ny loharanon-karena avy amin'ny fakana ny kaontinanta, izay ny Tendrontany Atsimo amin'izao fotoana izao fifanarahana mandrara.
Na izany aza, ny fifanarahana ny fifanarahana ara-nofo nandrara manta asa fanesorana avy amin'ny kaontinanta tonga ho famerenana tamin'ny 2048.
'2048 toa lavitra izy, saingy ... nisy ahiahy nitsangana fa Beijing dia mikatsaka ny maharitra' hedging 'tetika raha toa ny kaontinanta dia natsipy misokatra mba hampitaovana ny fampandrosoana, anisan'izany ny harena ankibon'ny tany sy ny solika sy ny entona ary atsofony, amin'ny ho avy , 'Marc Lanteigne, mpampianatra ao amin'ny Shinoa ny politika ivelany ao amin'ny Massey University, nilaza AFP.
'Na izany aza, ankehitriny no mandray Shina fikarakarana lehibe mba manamafy ny ara-tsiansa ny tendrony lafiny politika, hampiroborobo ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana hafa, ary hanala olana fa ny revisionist hery any Antarctica,' hoy Lanteigne.
Firenena samihafa foana faladiany in Antarctica, dia nizara toerana ho an'ny fikarohana ara-tsiansa ambanin'ny fifanarahana iraisam-pirenena 1959, izay nandray anjara tamin'ny 1983 Sina.
Shina amin'izao fotoana izao dia manana fikarohana efatra peo momba ny kaontinanta sy ny fahadimy no nomanina ho an'ny 2019, izay te-hametraka Shina amin'ny feh miaraka amin'ny Etazonia isa ny faladiany.
'Hosting ny fivoriana ao Beijing dia fahafahana ho an'ny Shina mba hahazo ny fanekena iraisam-pirenena (vaovao) ao amin'ny Tendrontany Atsimo toerana malaza raharaha,' hoy Anne-Marie Brady, manam-pahaizana manokana eo amin'ny Sinoa sy mamanala politika tao amin'ny Oniversiten'i Cantorbéry, Nouvelle-Zélande.
Sina mba tsy mitady fanovana ny lalàna efa misy Tendrontany Atsimo amin'ny hoavy, Brady nilaza AFP.
Nilaza izy ireo fa izy no 'tsy te hampitombo fepetra fiarovana, araka izay nampiseho araka ny mpanohitra ny tolo-kevitra ho an'ny faritra an-dranomasina voaaro ao amin'ny Southern Ocean.'
Post fotoana: May-23-2017